Modely taratasy: mangataka famerenam-bola amin'ny fandaniam-bola
Posted by Tranquillus | Dec 17, 2020 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Antsipiriany sy taratasy maodely maimaim-poana ho an'ny famerenam-bola ny vola lany amin'ny matihanina. Izy rehetra dia mandany amin'ny iraka ampanaovinao. Ho an'ny filàna sy ny asan'ny ny orinasanao dia andraikiny. Ny lalàna mifehy ny asa dia manome, na amin'ny fampisehoana antontan-taratasy manohana na amin'ny endrika tambin-karama farany ambany, dia haverina amin'ny vola naloakanao ianao. Na izany aza, ny fomba fitsaboana indraindray dia mety ho lasa maharary ary mandany fotoana. Anjaranao ny mandamina ny tenanao ary mahazo antoka fa averinao ny volanao. Tsy azo inoana fa ny hafa no hiahiahy momba izany ho anao.
Inona avy ireo karazana fandaniam-bola samihafa?
Indraindray ianao dia mety iharan'ny fandaniana amin'ny raharaham-barotra mandritra ny asanao. Ireo ny fandaniana ilaina fa tsy maintsy aroso mandritra ny fanatanterahana ny adidinao sy izay misy ifandraisany amin'ny fanatanterahana ny asanao. Ny ankamaroan'ireo tatitra momba ny fandaniana ireo dia andraikitry ny orinasa.
Ny antsoina hoe vidin'ny matihanina dia mety hanana endrika samihafa, ny tena manan-danja amin'izany dia:
Saran'ny fitaterana: rehefa mandeha fiaramanidina, lamasinina, bus na taxi ho an'ny iraka na handeha hamonjy fivoriana matihanina;
Sarany amin'ny kilometatra: raha mampiasa ny fiarany manokana ho an'ny dia ataon'ny mpiasa ny mpiasa (kajy amin'ny halaviran'ny kilometatra na amin'ny hotely alina);
Ny vidin'ny fikarakarana: ho an'ny sakafo atoandro;
Ny vidin'ny fivezivezena matihanina: mifandraika amin'ny fiovan'ny toerana izay mitarika fiovana eo amin'ny toeram-ponenana.
Vola amin'ny antontan-taratasy,
Sarany amin'ny akanjo,
Ny vidin'ny fampiasana fitaovana NTIC (teknolojia vaovao sy fifandraisana vaovao),
HAMAKY Master afa-po sy endrika ao amin'ny asa soranao
Ahoana no fanatanterahana ny fanonerana ny fandaniam-bola?
Na inona na inona toetran'ny fandaniana, ny fepetra sy fepetra amin'ny famerenam-bola dia mety manana endrika roa. Na nomena ho an'ny fifanarahana asa izy ireo, na tafiditra ao anatin'ny fampiharana ao amin'ny orinasa.
Ny fandoavana dia azo atao amin'ny alàlan'ny famerenam-bola mivantana ny vidiny tena izy, izany hoe ny fandoavana rehetra. Ireo dia mifandraika amin'ny vidin'ny telecommuning, ny fampiasana fitaovana TIC, ny fivezivezena matihanina, na ny vidin'ny mpiasa navoaka tany ivelany. Arak'izany, ny mpiasa dia mamindra ny tatitra momba ny fandaniam-bola isan-karazany amin'ny mpampiasa azy. Ataovy izay hihazonana azy ireo mandritra ny telo taona farafahakeliny.
Azo atao ihany koa ny mandoa onitra anao indraindray na indraindray. Ity fomba ity dia raisina amin'ny vidiny miverimberina, ohatra, ho an'ny mpandraharaha ara-barotra. Amin'ity tranga ity dia tsy voatery manamarina ny fandaniany ity farany. Ny valindrihana dia napetraky ny fitantanan-ketra ary miovaova arakaraka ny toetoetrany amin'ny vidiny (sakafo, fitaterana, toeram-ponenana vonjimaika, fanesorana, tambin-karama mileage). Na izany aza, raha mihoatra ny fetra dia mety mitaky ny antontan-taratasinao ny mpampiasa. Marihina fa ny talen'ny orinasa dia tsy manan-jo hahazo io vola io.
Ny fizotry ny fitakiana ny famerenam-bola amin'ny fandaniam-bola
Toy ny fitsipika ankapobeny, ny famerenam-bola ny vola lany amin'ny matihanina dia apetraka aorian'ny fandefasana ireo antontan-taratasy fanohanana amin'ny departemantan'ny kaonty na amin'ny mpitantana ny mpiasa. Ny fifandanjana dia hiseho amin'ny slip anao manaraka ary ny vola dia hafindra ao amin'ny kaontinao.
Manana 3 taona eo am-pelatananao ianao mba hanomezana porofo momba ny fandanianao matihanina ka omena vola. Ankoatra io fe-potoana io dia tsy voatery mandoa azy ireo intsony ny lehibenao. Raha sendra diso na manadino na inona na inona antony tsy hamerenanay ny volanao. Tena tsara ny miditra an-tsehatra haingana amin'ny alàlan'ny fandefasana taratasy mangataka famerenam-bola amin'ny orinasanao.
HAMAKY Mandefasa mailaka any amin'ny mpanara-maso anao: karazana fomba amam-panao inona no ampiasaina?
Mba hanampiana anao dia ireto misy santionany taratasy roa hametraka ny fangatahanao. Na izany na tsia. Ambonin'ny zava-drehetra, aza hadino ny mametraka ireo antontan-taratasy fanohanana tany am-boalohany ary mitahiry kopia ho anao.
Ohatra amin'ny taratasy ho an'ny fangatahana ara-dalàna amin'ny famerenam-bola ny vola lany amin'ny matihanina
Anaram-bosotra Mpampiasa anarana
Orinasa… (Anaran'ny orinasa)
(Tanàna), amin'ny… (Daty),
Lohahevitra: Fangatahana famerenam-bola amin'ny fandaniam-bola
Taorian'ny fandaniam-bola lany nandritra ny iraka farany nataoko. Ary izao te-handray soa amin'ny famerenam-bola ny vola lany amin'ny matihanina. Alefako aminao izao ny lisitra feno amin'ny fandoavam-bola mifanaraka amin'ny fomba fanao.
Noho izany dia nanao dia avy tany _____ (toerana fiainganana) nankany _____ (toerana nisy ny dia fivezivezena aho) nanomboka tamin'ny ________ ka hatrany _____ (datin'ny dia) hanatrehana fihaonambe manan-danja maro ho an'ny fampandrosoana ny orinasanay. Nandray fiaramanidina tany aho ary niverina nandritra ny diako ary nanao taxi-be.
Ho fanampin'ireo fandaniana ireo dia ampiana ny vidin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny vidin'ny sakafo atoandro. Ireo antontan-taratasy manohana ny fanamarihana ny fandraisako anjara dia mifamatotra amin'ity fangatahana ity.
Miandry valiny tsara avy aminao, mangataka aminao aho mba handray, Tompoko, ny arahaba feno fanajana.
Ohatra amin'ny taratasy mangataka famerenam-bola amin'ny fandaniana arak'asa raha toa ka mandà ny mpampiasa
Lohahevitra: Mitaky ny famerenam-bola amin'ny fandaniam-bola
Ao anatin'ny andraikitro dia mila nanao dia maromaro tany ivelany aho. Amin'ny maha mpiasa ahy dia nandeha tany [toerana] 4 andro aho ho an'ny iraka manokana mifandraika amin'ny toerako.
Nahazo alàlana avy amin'ny mpitantana ny laharam-boninahitro aho, niaraka tamin'ny fiarako ihany. Nandeha kilometatra tanteraka aho. Ampiarahina amin'izany ny vidin'ny sakafo sy ny alina maromaro ao amin'ny hotely, amin'ny totalin'ny [vola] euro.
Voalazan'ny lalàna fa tsy maintsy entin'ny orinasa ireo fandaniana matihanina ireo. Na eo aza izany, na eo aza ny zava-misy fa ny antontan-taratasy manohana rehetra dia nomena ny departemantan'ny kaonty rehefa niverina aho, dia mbola tsy nahazo ny fandoavam-bola mifandraika amin'izany aho.
Izany no antony angatahiko anao hiditra an-tsehatra mba hahafahako mandoa vola haingana araka izay tratra. Ho hitanao ao ny kopian'ny faktiora rehetra izay manamarina ny fangatahako.
Mandritra ny fisaorana mialoha anao noho ny fanampianao, azafady azafady, Andriamatoa Tale, ny antoka omena ahy indrindra.
Sintomy ny "Sample-letter-for-a-normal-fangatahana-ho-famerenam-bola-of-Professional-expense.docx"	Ohatra-amin'ny-taratasy-ho-a-normal-fangatahana-ho-reimbursement-ny-matihanina-fandaniana.docx - Nalaina 4595 fotoana - 21 Kb
HAMAKY Ahoana no hanoratanao mailaka mazava sy matihanina?
Sintomy ny "Sampel-taratasy-ho-famerenam-bola-ho-matihanina-amin'ny-raharaha-fandavana-avy-ny-mpampiasa.docx"	Ohatra-amin'ny-taratasy-ho-ny-fangatahana-ho-famerenam-bola-ho-matihanina-in-case-of-refusing-avy-ny-mpampiasa.docx - sintina 4567 fotoana - 13 Kb
Modely taratasy: mangataka famerenam-bola amin'ny fandaniam-bola January 8th, 2022Tranquillus
Teo alohaManan-jo hanemotra ny tafatafa matihanina amin'ny taona 2021 ve aho nefa tsy voasazy?
manarakaAndro fialantsasatra sy andro fitsaharana: azo atao ny mametraka sy manova ny datin'izy ireo hatramin'ny 30 Jona 2021
Sonia mailaka matihanina
Inona no karazana fahalalam-pomba handefasana fisaorana amin'ny mailaka matihanina?
Teknika fanoratana sy fomba famakiana
Mailaka matihanina: Fitsipika sasantsasany momba ny endrika fiantsoana mahazatra